Ahoana ny fomba hijerena Hotstar any Etazonia? (Hisoroka na aiza na aiza) - Fialam-Boly
Hotstar dia sehatra mora vidy miaraka amin'ny atiny fialamboly marobe. Ny fahafaha-manao azy dia mahatonga azy ho ‘mora’ kokoa noho ny maro hafa fampiharana mivantana alternatives any USA. Amin'izao fotoana izao, Hotstar dia misy amin'ny fomba ofisialy any Canada, UK, India, ary Indonesia.
Misy kinova hafa amin'ny Hotstar misy. Misy Disney + Hotstar azo alaina manokana any India sy Indonezia. Mandritra izany fotoana izany, Hotstar any USA, UK, ary Canada dia tsy manolotra serivisy Disney + miaraka aminy. Rindrambaiko mijoro irery izay manome atiny Indiana (Bollywood) sasany manana fahazoan-dàlana iraisam-pirenena.
Ireo fetra ireo dia mety hanakivy anao tsy hampiasa ilay lampihazo. Na izany aza, misy fomba maro ahafahanao mijery ny Hotstar. Amin'ity lahatsoratra ity dia hizaha ireo fomba ireo amin'ny fomba ofisialy ka hatrany amin'ny mety kokoa nefa mbola azo atao ihany.
Torolàlana hijerena Hotstar any Etazonia:
Azonao atao ny mitsidika ilay tompon'andraikitra tranonkala an'ny Hotstar ho an'ny United States of America Version. Tsy misy atiny maimaimpoana ho an'ny mpihaino amin'ity faritra manokana ity. Amin'izay dia tsy maintsy mametraka ny rindranasa ofisialy ianao ary misoratra anarana amin'ny drafitra iray. Mora ny fizotran'ny famandrihana. Misy politika famerenam-bola maharitra fito andro raha tsy tianao ireo serivisy.
Raha misoratra anarana amin'ny Hotstar ianao dia afaka mandefa horonantsary roa isaky ny mandeha mora ao anaty ny app amin'ny fitaovana iray. Hotstar dia manolotra fisoratana anarana hatramin'ny fitaovana dimy ihany koa. Na izany aza, miankina amin'ny drafitra, azonao atao ny mijery miaraka amin'ny fitaovana roa ka hatramin'ny telo indray mandeha.
Ny mifanentana amin'ilay fampiharana dia somary voafetra ihany amin'ny fitaovana marani-tsaina toa ny finday avo lenta, takelaka ary fahitalavitra Smart. Tsy afaka mampiasa azy io amin'ny konsol hafa ianao, fa misy ny kinova fanaova-browser azo alaina amin'ny PC.
Ny fomba ofisialy:
Ity fomba ity dia voafetra ihany ary manome anao ny fidiranao amin'ny Hotstar izay misy ho an'ny mpihaino US. Tsy hanana fidirana voafetra amin'ny atiny Indiana sy serivisy streaming hafa ianao. Hotstar dia sarobidy amin'ny mpijery an'i Amerika araka ny atiny atolotra azy. Na izany aza, afaka mandray soa bebe kokoa ianao raha mampiasa ny kinova Disney + Hotstar. Ny fomba fanao dia voalaza etsy ambany, aorian'io fizarana io.
Na ahoana na ahoana, raha mbola te hampiasa ny kinova ofisialy ho an'ny Fanjakana ianao dia ireto misy dingana:
Tsidiho ny tranonkala ofisialy us.hotstar.com
Tadiavo ny fampiharana ary sintomy
Satria tsy misy atiny maimaimpoana, rehefa mandefa ny fampiharana ianao dia hangataka anao hisoratra anarana
Azonao atao ny misoratra anarana, misoratra anarana ary miditra mba hanombohana mandefa ny atiny
Mila manome ny mari-pahaizana momba ny fandoavam-bola ianao.
Raha tsy afa-po amin'ny atiny ianao dia misy antoka fampindramam-bola 7 andro azonao ampiasaina.
Ahoana ny fomba hijerena an'i Hotstar amin'ny Firestick?
Misy fampiharana ofisialy ho an'ny Hotstar hita ao amin'ny fivarotana Amazon. Azonao atao ny mampiasa ny teny lakile ao amin'ny Firestick hikaroka ny fivarotana kilalao ary hahazo ilay fampiharana. Azonao atao ny misintona azy avy any ary mampiasa azy io ho toy ny serivisy streaming mahazatra.
Na izany aza, mbola mila famandrihana ihany ianao, toy ny fitaovana hafa, hankafizanao ny Hotstar amin'ny Firestick any Etazonia.
Ahoana ny fampidinana Hotstar?
Azonao atao ny misintona ny Hotstar ho an'ny fitaovanao amin'ny fivarotana tsirairay. Hita ao amin'ny Google, Apple, ary Amazon Play Store izy io. Raha tsy izany, azonao atao ny mitsidika ny tranonkala ofisialy handefasana na hisintomana ny fampiharana avy any. Ireo rehetra ireo dia mbola mitaky anao hisoratra anarana amin'ny Hotstar amin'ny fandefasana ny atiny.
Raha te hankafy Indian HotStar ianao dia hahita fomba azo antoka voalaza etsy ambany. Hatramin'izao, tsy mbola misy Disney + Hotstar ho an'ny USA amin'ny fomba ofisialy. Disney + Hulu famandrihana dia mety ho ny kapoakanao kokoa.
Ahoana no hijerena Disney + Hotstar?
Hotstar dia nisy eran'izao tontolo izao, isaky ny faritra. Ankehitriny dia nampiasa Geo-lock sy Geo-restriction ihany koa izy mba hamerana ny fisiany sy ny fidirana amin'ny atiny. Misy kinova manokana azo alaina any Canada sy Etazonia. Disney + Hotstar dia misy irery any India sy Indonezia.
Noho izany, raha hampiasa Disney + Hotstar dia mila mampiasa fitokisana ianao VPN (Tambajotra tsy miankina virtoaly). Na izany aza, mampiasa serivisy fanakanana VPN i Hotstar, toa an'i Netflix. Tsy dia azo inoana tokoa fa ny VPN maimaim-poana dia afaka mihoatra ny Hotstar's VPN-hidy. Toy izany koa, mampidi-doza ny fampiasana serivisy VPN maimaim-poana.
Iza amin'ireo VPN no ampiasaina amin'ny Disney + Hostar?
Azonao atao ny mampiasa mpanome tolotra VPN be dia be eny an-tsena. Misy ny varotra ho an'ny ankamaroan'izy ireo. Saika ny ankamaroan'izy ireo dia manolotra fitaovana marobe (Dimy na mihoatra). Noho izany, raha ambany vola ianao, dia afaka miditra miaraka amin'ny fianakavianao na ny namanao mba hisoratra anarana amin'ny VPN VPN voalohany.
Mpamatsy VPN maro no manolotra fanandramana maimaimpoana na antoka famerenam-bola hampiasaina raha maniry VPN maimaim-poana ianao. Ohatra, ExpressVPN dia manolotra programa referral aza. Raha afaka mahazo namana hanatevin-daharana anao ianao sy ny namanao dia hotsaraina mandritra ny 30 andro. Raha manampy namana maro ianao dia hitombo ny fotoam-pitsarana.
Ny fisoratana anarana dia tsy hahasoa anao fotsiny amin'ny fijerena Disney + Hotstar fa hitondra anao filaminana sy anarana tsy fantatra anarana VPN feno. Tsara kokoa ny mandefa ny Disney + Hotstar sy ny atiny voafetra voafetra ary tsy arahana.
Ity misy fomba ahafahanao mampiasa VPN hijerena Disney + Hotstar:
Sintomy ny VPN premium ho an'ny fitaovanao
Misoratra anarana na ampiasao ny kinova andrana
Raha vao mampavitrika ny VPN ianao dia mifandraisa amin'ny mpizara Indiana
Tsara kokoa ny mpizara indiana noho ny indonezianina ho an'ny Disney + Hotstar
Raha vao mifandray amin'ny mpizara Indiana ianao dia tsidiho ny tranokala ofisialin'i Hotstar.
Azonao atao izao ny misintona ny fampiharana na mandeha an-tserasera
Raha vantany vao misintona ilay fampiharana ianao dia azonao ampiasaina.
Tombontsoa amin'ny fampiasana Disney + Hotstar:
Avy amin'ny mpizara indiana -
Betsaka ny tombony azo amin'ny fampiasana Disney + Hotstar mihoatra ny fenitra Hotstar USA hatolotra. Voalohany, mora kokoa ny saram-pisoratana anarana ho an'ny kinova Indiana. Ankoatr'izay, ity misy tabilao fampitahana haingana:
Misy streaming an-tserasera maimaim-poana
Misy atiny eksklusif India
Sarimihetsika sy seho Bollywood
Disney + dia misy
Marvel, Pixar, ary National Geography dia tafiditra ao
Fitsarana maimaimpoana mandritra ny 30 andro
Jereo amin'ny fiteny Hindi na Anglisy sy fiteny hafa
Fantsona indianina sy iraisampirenena toa ny HBO, tamba-jotra Star, ary maro hafa
Avy amin'ny USA Server -
Mitaky famandrihana amin'ny streaming
Voafetra amin'ny atiny amerikana
Ny atiny Bollywood manana fahazoan-dàlana iraisam-pirenena ihany no misy
Tsy Disney +
Tsy misy fidirana manokana amin'ny Marvel, Pixar, ary Jeografia nasionaly
7-andro antoka famerenam-bola
Jereo amin'ny teny anglisy
Ny fantsona any Etazonia ihany
Rehefa manao ny fampitahana ianao dia miharihary fa ny Disney + Hostar dia kinova ambony kokoa amin'ny Hotstar. Tsarovy izao fa isaky ny mampiasa Disney + Hotstar ianao dia tsy maintsy mampihetsika ny VPN handehandeha any Etazonia. Na dia mampiasa ny drafitra tsara indrindra aza ianao dia mora kokoa noho ny famandrihana mahazatra an'ny Hotstar.
Hotstar dia fampiharana streaming any India izay misy amin'ny firenena voafetra. Raha tena te-hijery ny mety ho izy ianao dia tsara kokoa amin'ny fisoratana anarana VPN sy Disney + Hotstar.Na izany aza, raha manahy momba ny ara-dalàna ianao, dia tsy tsy ara-dalàna ny fampiasana VPN. Tsy mandoto ny atiny koa ianao, satria mbola mandoa ny famandrihana.
Ireo no fomba rehetra azonao ampiasaina handefasana ny Hotstar. Ho an'ireo izay tsy te hampiasa Disney + Hotstar fa mifikitra amin'ny kinova Hotstar USA dia ampiasao ny fomba ofisialy.Amin'ny farany, na dia tsy te handefa Disney + Hotstar aza ianao, dia mendrika ny fampiasam-bola ny fampiharana. Izy io dia iray amin'ireo mpamatsy serivisy mora indrindra any Etazonia miaraka amin'ny vidin'ny fifaninanana isam-bolana sy mandritra ny taona. Azonao atao ny mahita fa mendrika ny fampiasam-bola izany.
Ahoana ny fomba ahazoana fitsapana maimaimpoana an'i Disney Plus?
youtube mijery sarimihetsika maimaim-poana
inona ny kaody fahadisoana 83 ao amin'ny disney plus
mpitety tranonkala an'ny roku 3
inona no hafa amin'ny iTunes
Mpianatra netflix 6 volana maimaim-poana
avadiho ny vidéo youtube ho mp3
mijery sarimihetsika amin'ny HD maimaim-poana